BBC Somali - Warar - Soomaalida yaa matalaya?
Soomaalida yaa matalaya?
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 15 Febraayo, 2012, 18:37 GMT 21:37 SGA
Ka sokow in ka badan 53 Madaxweyne, Raiisal Wasaare iyo Madax ururro caalami ah, shirka London ee Soomaalida ee 23-ka February waxaa lagu martiqaaday wufuud dhowr ah, oo mid kastaaba iskii u matalayo Soomaalida ama qeyb ka mid ah. Dowladda waxaa ka socda saddex mas'uul. Waxaa iyagana iskood loo marti qaaday Somaliland, Puntland, Galmudug, ASWJ. Haddaba yaa kala hoggaaminaya wufuudda?
Shiikh Shariif Shiikh Axmed, Madaxweynaha Dowladda KMG ah ee Soomaaliya. Waxaa laba sano loogu doortay shirkii Djibouti January 2009. Wuxuu markaa madax u ahaa jabhaddii ARS, isaga oo ka horna madax u noqday Midowga Maxkamadaha Shareecada. Markii xilligu ka sii dhammaanayay ayaa waxaa sannad ugu daray heshiiskii Kampala. Hadda xilligiisu wuxuu ku eg yahay August 2012. Madaxweynuhu wuxuu rajo ka qabaa in dowladda dhexe lagu taageero shirka, mustaqbalka siyaasaddana looga dambeeyo saxiixayaasha toobiyaha siyaasadda ee ku shiray Garowe.
Axmed Maxamed Silaanyo, Madaxweynaha Somaliland - Waxaa Madaxweyne loo doortay 2010. Waa markii ugu horreysay ee heerkan aySomaliland ay uga qeyb gasho shir looga hadlayo Soomaaliya. Waa ruug caddaa siyaasadda Soomaalida ku raagay. Wuxuu Soomaaliya ka noqday Wasiir in yar ka dib markii Maxamed Siyaad uu waddanka taladiisa af gembi militeri uu kula wareegay. Ka dib wuxuu noqday Guddoomiye Jabhaddii SNM ee la dagaallanatay ciidankii dowladda dhexe. Wuxuu Wasiir ka noqday Somaliland, intii aanuu madax ka noqon xisbigii mucaaradka Somalilnd ugu weynaa, ka dibna wuxuu ku guuleystay doorashada. Wuxuu cayaarayaa qamaar siyaasadeed. Haddii uu madaxda shirka imaaneysa ka helo is faham waxaa laga yaabaa in ay soo de dejiso aqoonsi ay hesho Somaliland. Haddii uu wax uu dadka ku qanciyo kala imaan waayo shirka, waxaa dhici karta in mucaaradku ay isku dayaan in ay uga faa'iideystaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa uu damaanad buuxda ka soo qaatay dadkiisa in uu shirkan uga qeyb galo.
Cabdiweli Maxamed Cali, Ra’iisal Wasaaruhu - wuxuu ahaa bare ka dhiga jaamacad ku taal Mareykanka, intii aan Wasiir loo magacaabin 2010. Ka dibna wuxuu Ra’iisal Wasaare noqday markii Kampala lagu gaaray heshiis xaal mastuur ah oo lagu bixiyay Ra’iisal Wasaarihii isaga ka horreeyay, Maxamed Cabdullaahi.
Cabdiraxmaan Shiikh Maxamed, Madaxweynaha Puntland - waxaa loo doortay Madaxweynaha maamulka Puntland January 2009. Waxaa xarun u ah magaalada Garowe. Wuxuu dhowaan marti geliyay shir Soomaaliyeed oo madaxda saxiixday toobiyaha siyaasadda Soomaaliya oo dhami ay isugu yimaadeen. Waxaa uu rajo weyn ka qabaa in shirku taageero dhaqaale u fidiyo maamul goboleedyada.
Maxamed Axmed Caalin, Madaxweynaha Galmudug - wuxuu madax u yahay maamul ay xaruntiisu tahay magaalada Gaalkacyo. Wuxuu dhowaan ka badbaaday afgembi siyaasadeed oo ay qaar Wasiirradiisa ka mid ahi ay u maleegeen. Wuxuu rajada la wadaagaa Puntland.
Maxamud Axmed Nuur-Baadi, Duqa magaalada Muqdisho - Waxaa uu ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka ku soo galay ARS. Tarzan waxaa lagu tilmaamaa in uu hawl wanaagsan ka qabtay caasimadda. Waa markii ugu horreysay ee Duq magaalo laga qeyb gelayo shir caalami ah oo Soomaaliya looga hadlayo.
Ahlu Sunna (ASWJ) - Ma aha maamul goboleed. Waa jabhad suufi ah oo la dirirta Shabaab. Xooggeedu wuxuu ku sugan yahay qeybo ka mid ah gobolka Galguduud. Waxay rajo ka qabaan in ay al Shabaab meel uga soo haraan.